ओलिका प्यारा खतिवडालाई बम्पर उपहार, नेकपा सचिवालयमा उथलपुथल - Media Dabali
ओलिका प्यारा खतिवडालाई बम्पर उपहार, नेकपा सचिवालयमा उथलपुथल
काठमाडौं- निवर्तनमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खतिवडालाई मन्त्रिस्तरीय सुविधा पाउनेगरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो ।
केही दिनअघि कार्यकाल सकिएका खतिवडा अर्थमन्त्रालयबाट बिदा भएका थिए । उनी बिदा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै सुचना प्रविधि तथा अर्थमन्त्रालय हेर्दै आएका थिए ।
अब, मन्त्री सरहको सुविधा दिए प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकारमा डा. खतिवडा नियुक्त हुने भनेको ओलीले अर्थमन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारीमा फर्काएका हुन् । डा खतिवडाको थपिएको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पनि गत भदौ २० गते सकिएको थियो ।
उनलाई राष्ट्रिय सभा सांसद नियुक्त गरी अर्थमन्त्रीको रुपमा पनि निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको प्रयास असफल भएपछि खतिवडा मन्त्रालयबाट बिदा भएका थिए।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार मन्त्री बन्नका लागि संसद सदस्य हुनैपर्ने र नभएमा मन्त्री बनेको छ महिनाभित्र सांसद बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनी मन्त्री पदमा रहिरहनबाट बन्चित भएका थिए। अहिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा नेकपाका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमलाई नियुक्त गर्ने नेकपाले निर्णय गरिसकेको छ ।
नेकपा सचिवालयले भने खतिवडाकाे बिदा गर्न पहिलेदेखिनै तयारी गर्दै आएकाे थियाे । यसबीच प्रधानमन्त्रीले फेरि खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयमा तान्दा नेकपा सचिवालयमा तनाबकाे स्थिती सिर्जना हुनसक्ने देखिएकाे छ ।
कांग्रेसको चर्काे खबरदारीपछि अर्थमन्त्री खतिवडा गले, लोकप्रिय निर्णय लिने संकेत
यसरी खुलेआम केपी ओलीविरुद्ध लागे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा !
अर्थमन्त्री खतिवडाको पद फेरी धरापमा, अब जोगिन कठिन
प्रधानमन्त्री बाहेक कसैलाई टेर्दैनन् युवराज खतिवडा, नेकपाको छवि माटोमा मिसाएको भन्दै आलोचना
ओलीले अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिँदै, बामदेव फेरी जिल्लिँदै!
ओलीलाई आपत: राजा हटाए भन्दा युवराजलाई हटाउन चर्को, बामदेवको घोषणाले खैलाबैला!
मंगलवार, भाद्र १६ २०७७०९:४३:०५
# केपी ओली # युवराज खतिवडा # बामदेव गौतम